FJKM Ankadindramamy Fahazavana » Toriteny Alahady 16 Martsa 2014
Toriteny Alahady 16 Martsa 2014
Natao ny 16 Mar 2014, Pasitera: Atoa RAKOTONDRASOA Harijaona Andriatsarafara, Mpitandrina
Toriteny , Alahady 16 Martsa 2014
– Salamo.86 , 1 – 10 ; Jaona.8 , 2 – 11 ; Romana.8 , 1 – 4
Jaona.8 , 2 – 11 no raisina handraisana hafatra ho antsika amin’ity Alahady faharoa amin’ny vani-potoanan’ny karemy ity. Tantaran’ilay vehivavy nijangajanga nentin’ny Mpanoradalana sy ny Fariseo teo amin’i Jesoa Kristy. Fihetsika nataon’ny Mpanora-dalana sy ny Fariseo mba hakana fanahy an’i Jesoa Kristy na manatanteraka tokoa izay voasoratry ny Lalan’i Mosesy na tsia. Miharihary eto anefa ny asan’Ilay Tompo Loharanon’ny Fahasoavana mitondra ny olona ho amin’ny tena fiainana satria mamonjy ny olona amin’ny fahotana.
– Mampandini-tena ny olona
– Maneho ny famindrampony Izy
– Mampitodika ny olona ho amin’ny fiainam-baovao
1. Mampandinin-tena ny olona
Teo anatrehan’Andriamanitra sy ny fiaraha-monina dia meloka ity vehivavy ity. Maika tokoa ireto mpiampanga ny hamono, hitora-bato azy araka ny Lalan’i Mosesy. Nikiry, niezaka fatratra hanameloka ity vehivavy ity ireto olona ( naharitra nanontany , and.7a ) .Mahagaga anefa fa tsy ny hanameloka azy, na ny hanamafy ny fiampangana azy no nataon’ny Tompo fa fampitodihana ireto mpiampanga mba handini-tena. Hamantatra ny tenany , ny nataony ihany koa teo anatrehan’Andriamanitra sy ny fiaraha-monina no teny nataon’ny Tompo tamin’izy ireo. ( and.7b ). Azo tsorina hoe : “mahazo miteny ianareo miampanga azy, mahazo mitora-bato ianareo ho fanamelohana azy rahatoa ka marina sy tsy mana-tsiny eo anatrehan’Andriamanitra tokoa ianao ( raha toa ka tsy nanota ianareo ). Araka izany nekeny ny hanatanterahana ny fitorambato fa izay tsy nanota ihany no afaka manao izany. Kanefa koa ny fitoraham-bato dia famonona olona
Ry Havana malala, lalana ahafahan’ny Tompo mamonjy antsika amin’ny fahotana ny fahaizana mandini-tena. Matetika tokoa dia ny hitsara na hiampanga ny hafa no mahamaika antsika. Tsarovy fa mitarika antsika ho amin’ny fahotana ny fitsaratsarana foana ny namana. Raha nitorabato ity vehivavy ity ireto mpiampanga ireto dia latsaka amin’ny fahotana lalina satria namono olona. Ary iza moa no ilay mpiampanga fa tsy ny devoly. Noho izany ary mahaiza mandinitena fa mitsara ny hafa.Mahaiza mandinitena fa lalana anafahan’ny Tompo antsika tsy hanota izany.
2. Maneho ny famindrampo Izy
Lehibe tokoa ny fahotana vitan’ity vehivavy ity. Kanefa rehefa nasain’ny Tompo nandini-tena ireo mpanora-dalana sy Fariseo dia niala tsirairay. Tsy nisy sahy nitorabato ity vehivavy ity. Tsy nisy sahy nanameloka azy. Hay zany isan’ny mpanota ihany koa izy ireo.Ny Tompo irery ihany sisa no tompon’ny teny farany. Nasehon’ny Tompo noho izany ny famindrampo sy ny fahasoavany . Na dia nanota mendrika ho faty aza ity vehivavy ity dia tsy nanameloka ny Tompo namela heloka no nataony. Namafa izay fahadisoany rehetra. Noporofoin’i Jesoa Kristy teto indray fa na toa inona na toa inona vesatry ny fahotana nataon’ny olona dia afaka mamela izany Izy Nofoanany ny tamin’ny famindrampo ny fanamelohana noho ny ota nihatra ( Rom.8 , 1-2 ). Ary mazava ny voalaza fa : “Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin’izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao fa mba hamonjy izao tontolo izao” ( Jao.3 , 17 )
Ry Havana malala , tsarovy fa Andriamanitra fitiavana ny Andriamanitra ivavahantsika. Mamindro fo sy miantra mandrakariva Izy. Eny mamindrafo sy mamela heloka ho an’izay rehetra tonga eo anatrehany. Ny olona miaiky heloka, tsy manamari-tena dia omeny famelan-keloka. Mamela heloka sy mamonjy amin’ny fahotana Izy ho an’izay mahay mibebaka marina Aminy , hitantsika ny Salamo.86 , 5 fa mamindra fo ho an’izay miantso Azy Izy.
3. Mampitodika ny olona ho amin’ny fiainana vaovao Izy
Nahazo famindrampo, nahazo famelan-keloka ilay vehivavy niaina tamin’ny ota. Voavela ny helony . Mba ahafahany mitoetra amin’ny famonjen’Andriamanitra. Mba ahatonga azy tsy ho rembin’ota intsony dia mampitodika azy ho amin’ny lalana sy ny fiainana vaovao i Jesoa Kristy Tompo. Hoy ny Tompo taminy : “ aza manota intsony”. Midika izany afaka tamin’ny lalan’ny ota ianao. Efa voavela heloka ianao. Mahaiza mitoetra amin’izany ka ialao, ilaozy lavitra ny tontolo mety hitarika sy hitondra anao amin’ny fahotana indray. Aoka haharikoriko anao ny ota. Tokony tsy hahay hanota intsony ianao fa efa afaka ianao, efa resinao izany. Efa niala tao amin’ny tontolon’ny aizina ianao, aza miverina amin’izany intsony fa mizora ho amin’ny lalana mazava. Mazava araka izany fa izay efa novonjen’i Kristy, noraisin’i Kristy an-tanana ny fiainany dia mizotra amin’ny fiainana tsara hatrany araka ny hoe : “Raha misy olona ao amin’i Kristy dia olombaovao izy” ( II Kor.5 , 17 )
Ry Havana malala fiainana, fahavelomana no sitrak’Andriamanitra ho antsika rehefa. Efa namony antsika tamin’alalan’i Jesoa Kristy maty teo ambony hazo fijaliana Izy. Nanafaka antsika tamin’ny fatoran’ny fahotana sy ny fahafatesana Izy.Noho izany tarihina isika mba hizotra ho amin’ny fiainam-baovao sy ny lalam-baovao mitondra sy mitahiry antsika ho amin’ny tena fiainana mandrakizay. Ao anatin’ny vani-potoanan’ny Karemy isika ankehitriny , vani-potoanan’ny fandinihan-tena sy ny fibebahana. Efa namonjy antsika ny Tompo. Mizotra ho amin’ny fiainam-baovao marina tokoa ve isika sa mbola mitoetra amin’ny lalan’ny ota. Very maina ny fahafatesan’ny Tompo teo amin’ny hazo fijaliana raha mbola mifkitra amin’ny ota ihany isika. Noho izany miova,mibebaha, ialao ny tontolon’ny ota fa midira kosa amin’ny tontolon’ny fiainana. Hoy no voalazan’i Paoly Apostoly ao amin’ny Efes.5 , 8 – 13. Mizora ary amin’ny lalan’ny fiainana vaovao. Amena.